I-Gamma Theta Upsilon - IJografi ihlonipha uMbutho
by UJessica Leigh Rosier
I-Gamma Theta Upsilon, uMbutho weNtlonipho weGeographers
I-Gamma Theta Upsilon (GTU) yindawo ehloniphekileyo yabafundi kunye nabaphengululi belizwe. Amaziko eemfundo kunye namasebe e-geography eMntla-Melika anamahluko aseGTU asebenzayo. Amalungu kufuneka ahlangane neemfuno zemfundo ukuze aqaliswe kuluntu. Izahluko zivame ukubamba imisebenzi ye-geography-themed activities and events. Iinzuzo zobulungu zibandakanya ukufikeleleka kobugcisa kunye nophando lwezemfundo.
Imbali yeGamma Theta Upsilon
Iingcambu zeGTU zilandelwa emva kowe-1928. Isahluko sokuqala sise-Illinois State Normal University (ngoku i-University of Illinois State) phantsi kolawulo lukaDkt. Robert G. Buzzard. UBuzard, uprofesa eyunivesiti, wayekholelwa ukubaluleka kweeklabhu zegrafi zabafundi. Ekusekeni kwayo, isahluko kwiYunivesithi yase-Illinois State Normal inamalungu angama-33 kodwa i-Buzzard yazimisela ukuphuhlisa i-GTU ibe yintlangano yonke. Kwiminyaka elishumi kamva, umbutho ungeze ii-14 izahluko kwiiyunivesithi ngaphesheya kwe-United States. Namhlanje, kukho izahluko ezingaphezu kwama-200, kuquka iikoleji zaseCanada naseMexico.
Insignia yeGamma Theta Upsilon
Isimboli se-GTU sisisigxina esibalulekileyo esinesikhuselo esisixhenxe. Ngesiseko seenkcukacha eziphambili, inkwenkwezi ezimhlophe zimelela i-Polaris, esetyenziswe ngabahambi bexesha elidlulileyo kunye nelikhoyo. Ngaphantsi, iinqalo ezi-5 ze-blue zeblu zimelela ihlabathi elithandathu elwandle elizisa abaphandi kwilizwe elitsha. Icala ngalinye lekhuselo libonisa yokuqala kwiizwekazi ezixhenxe . Ukufakwa kwala ma-initials kwikhuselo kunenjongo; Amazwekazi aseNdala eNdizwe eYurophu, e-Asia, e-Afrika nase-Australia. Olunye uhlangothi lubonisa iMveli eNtsha yeNyakatho Melika, eMzantsi Melika, nase-Antarctica eyafunyanwa kamva. Uphawu oluqhubekayo luvela kwimbala eboniswe kwi-key tosignia. UBrown umele uMhlaba. Ukukhanya okwesibhakabhaka kumele ulwandle, kwaye igolide imele isibhakabhaka okanye ilanga.
Iinjongo zeGamma Theta Upsilon
Wonke amalungu kunye nezahluko ze-GTU zikwabelana ngeenjongo ezifanayo, njengoko kuchazwe kwiwebhusayithi yeGamma Theta Upsilon. ImiSebenzi yeSahluko, ukusuka kwiiprojekthi zesevisi ukuya kuphando, kufuneka zigcine ezi ngqondweni ezintandathu. Zonke iinjongo zigxininisekile ngokusasazeka kwe-geography. Iinjongo zi:
1. Ukuqhubela phambili inomdla kwi-geography ngokufaka intlangano efanayo kubantu abanomdla kwintsimi.
2. Ukomeleza uqeqesho lwabafundi kunye noqeqesho ngokusebenzisa amava emfundo ngokungezelela kulawo maklasi kunye nebhubhoratri.
3. Ukuqhubela phambili isimo sejografi njengoluleko lwenkcubeko noluncedo lokufunda nokuphanda.
4. Ukukhuthaza uphando lwabafundi ngomgangatho ophakamileyo kunye nokukhuthaza ukukhutshwa kokuphuma.
5. Ukudala nokulawula imali yokuqhubela phambili isifundo esiphumeleleyo kunye / okanye uphando kwintsimi ye-geography.
6. Ukukhuthaza amalungu ukuba asebenzise ulwazi lwezentlalo kunye nezakhono ekusebenzeni kuluntu.
I-Gamma Theta Upsilon Umbutho
I-GTU ilawulwa ngumgaqo-siseko kunye nemigqaliselo emide, ebandakanya isitatimende sabo semishini, izikhokelo zezahluko ngamnye, kunye nemisebenzi kunye nenkqubo yokusebenza. Isahluko ngasinye kufuneka silandele ngokusisiseko umgaqo-siseko kunye nemithetho.
Ngaphakathi kwintlangano, i-GTU imisela iKomiti eLawulayo yeSizwe. Imisebenzi iquka uMongameli, uVice-ngumbongameli wokuqala, uMongameli weLibini wePhondo, uNobhala oPhezulu oPhezulu, uNobhala oLawulayo, uNobhala wokuBhala, uMgcini-zincwadi kunye noMlando-mlando. Ngokuqhelekileyo, le mi sebenzi ibanjwe yi-faculty edla ngokucebisa isahluko seyunivesithi. Abafundi banyulwa kwakhona kwiKomiti yesiGqeba kaZwelonke yeGTU njengabaMmeli abaPhakamileyo kunye nabaFundi abancinane. Omega Omega, isahluko se-alumni kumalungu e-GTU, unommeli. Ukongezelela, umhleli weThe Geographical Bulletin ukhonza njengelungu leKomiti eLawulayo yesiZwe.
Ibhodi yobuholi beGTU idibanisa kabini ngonyaka; kuqala kwintlanganiso yonyaka yoMbutho we-American Geographers, okwesibini kwi-National Council for Geographic Education yonyaka.
Ngeli xesha, amalungu ebhodi axoxa ngeenkqubo zenyanga ezizayo kubandakanywa ukusasazwa kwemali, ukuhlawulwa kwemali kunye nokuphuhlisa icebo leqhinga lombutho.
Ukufaneleka kweBulungu kwiGamma Theta Upsilon
Ezinye iimfuno kufuneka zidibeneyo kubulungu kwiGTU. Okokuqala, abaviwa abanomdla kufuneka bazalise ubuncinane izifundo ezintathu ze-geography kwiziko lemfundo eliphezulu. Okwesibini, umgangatho wesilinganiso se-3.3 okanye ngaphezulu (kwi-4.0 scale), kubandakanywa nezifundo ze-geography, kuyafuneka. Okwesithathu, umviwa kufuneka agqibe ii-semesters ezintathu okanye iikota eziyi-5 zeekholeji. Isicelo esichazela impumelelo yakho kule mimandla isifumaneka kwisahluko sakho sendawo. Ukuhambelana nesicelo ngumrhumo wexesha elilodwa.
Ukuqala kwiGamma Theta Upsilon
Amalungu amatsha aqaliswa ngokutsha kwi-GTU kanye ngonyaka. Imikhosi yokuqalisa ingabonakaliyo (iqhutywe ngethuba lentlanganiso) okanye isesikweni (esabanjwe njengenxalenye yesidlo esikhulu) kwaye ihlala iququzelelwe ngumcebisi wezeMfundo, uMongameli kunye no-Vice-Mongameli. Ngomthendeleko, ilungu ngalinye kufuneka lithathe isifungo ngokuzibophezela ngokweenkonzo kwijografi. Emva koko, amatsha amatsha anikezwa ngekhadi, isitifiketi, kunye nepini ephethe i-GTU insignia. Amalungu akhuthazwa ukuba agqoke ipini njengophawu lokuzibophezela kwabo kwimihlaba yendawo.
Izahluko zeGamma Theta Upsilon
Akunabo bonke amaziko emfundo kunye namasebe e-geography aneeGTU izahluko; Nangona kunjalo, enye inokumiselwa ukuba imigaqo ethile idibeneyo. Iziko lakho lemfundo kufuneka libe yikholeji eyamkelweyo okanye eyunivesiti enikezela enkulu, encinci, okanye isatifikethi kwimihlaba. Kufuneka ube nabantu abathandathu okanye ngaphezulu abanomdla kubulungu abangakwazi ukuhlangabezana neemfuno zokufaneleka. Ilungu le-faculty kufuneka lixhase isahluko esitsha se-GTU. Emva koko, uMongameli we-GTU kunye no-Vice-Vice-President wokuqala bavota ukuvuma isahluko esitsha. UNobhala oLawulayo uqinisekisa ubungqina bakho beziko lemfundo kwaye unokusebenza ngokusemthethweni njengesahluko esitsha se-GTU kunye namagosa akhethiweyo ukuba akhonze umbutho wakho.
Imisebenzi egcinwe kwisahluko ngasinye ingahluka, nangona ininzi imibutho ineMongameli kunye nomcebisi weziko. Ezinye iindima ezibalulekileyo ziquka i-Vice-President, uMgcini-mali, kunye noNobhala. Ezinye izahluko zonyula umBhali-mlando ukuba abhale iziganeko ezibalulekileyo neziganeko. Ukongezelela, amaGosa ezeNtlalo kunye neNgxowa-mali anganyulwa.
Izahluko ezininzi ze-GTU zibamba iintlanganiso zeveki, ngeveki, okanye ngeenyanga, apho iiprojekthi ezikhoyo, uhlahlo lwabiwo-mali kunye nophando lwezemfundo zixoxwe ngazo. Isakhiwo esiqhelekileyo sentlanganiso iyahluka kwisahluko ukuya kwesahluko. Ngokuqhelekileyo, intlanganiso iya kuqhutywa nguMongameli we sahluko kwaye ilawulwe ngumcebisi weziko. Uhlaziyo oluvela kumgcinima-mali ngokumalunga nenkxaso yinto eqhelekileyo. Intlanganiso kufuneka ibanjwe kanye ngonyaka, ngokuhambelana nezikhokelo ze-GTU.
I-GTU ixhasa isahluko se-alumni, i-Omega Omega. Esi sahluko sibheka onke amalungu e-alumni, ehlabathini lonke. Imirhumo yobulungu ivela kwi-$ 10 ngomnyaka omnye ukuya kuma-400 engama-bomi. Amalungu e-Omega Omega athabatha i-newsletter enokwakheka ngokukhethekileyo kwimisebenzi yolwazi kunye neendaba, kunye ne-Geographical Bulletin.
I-Gamma Theta Upsilon Chapter Chapter
Izahluko ze-GTU ezisebenzayo zixhasa imisebenzi rhoqo. Ngokuqhelekileyo, iziganeko zivuleleke kumalungu kunye noluntu lwasekuhlaleni. Imisebenzi inokuphinda ipapashwe nge-campus flyers, uluhlu lwamagama abafundi, kunye namaphephandaba enyuvesi.
Ukuthatha inxaxheba kwimisebenzi yenkonzo yingxenye ebalulekileyo ye-mission ye-GTU. Ngokomzekelo, isahluko seKappa eYunivesithi yaseKentucky sinesiko senyanga sokuzithandela kwikhitshi yesobho. ISahluko se-Oklahoma State University sithenge izipho zeKrisimesi kubantwana abasweleyo. Isahluko se-University of Southern Mississippi se-Iota Alpha sazinikela ukuqokelela i-litter kwisiqithi saseShip kufuphi ne-Black Creek.
Ukuhamba kwimihlaba, ngokuqhelekileyo kwimiba ye-geography yokuzonwabisa, ngumsebenzi oqhelekileyo phakathi kwezahluko ze-GTU. KwiSyunivesithi yaseSt. Cloud State, isahluko se-Kappa Lambda seGTU sixhaswe ngekakaki kunye nokuya eenkampu ukuya kwii-Apostle Islands. Isahluko seDelta Lambda kwiYunivesithi yeSouth Alabama salungiselela uhambo lwamanqanawa ngeStyx River. Inyuvesi yaseNyakatho yeMichigan e-Eta Chi isahluko yaholela ekuphumeni kwelanga ekujongeni uLwandle lwaseMichigan njengophulaphulo lwamalungu.
Ngomgudu wokusasaza ulwazi lwendawo, izahluko ezininzi zicela isithethi ukuba ikhusele iziganeko zangoku okanye ihambele i-seminar yophando enxulumene noqeqesho. Ezi ziganeko, ezithathwa yizahluko ze-GTU, zivulwa ngokubanzi kuyo yonke indawo yoluntu. I-Mississippi ye-State University yaseMu Eta icwangcise i-Geoscience Student Symposium eyayibonisa abafundi ababonisa uphando lwabo ngeeseshini kunye neesithuba zeposta. E-California State University - iSan Bernardino, isahluko se-GTU esixhaswe yi-faculty kunye nesithethi sokutyelela ngokubambisana neveki yoLwazi lweJografi elaziwa ngamazwe ngamazwe.
I-Gamma Theta Upsilon Publications
Kabini ngonyaka, i-GTU ivelisa i -Geographical Bulletin . Amalungu omfundi we-GTU akhuthazwa ukuba afake umsebenzi we-scholarly malunga naliphi isihloko sejografi kwi-journalist yezobugcisa. Ukongezelela, amaphepha ngamalungu e-faculty angapapashwa ukuba anomdla kunye nokufaneleka.
I-Gamma Theta Upsilon Scholarships
Phakathi kwezibonelelo ezininzi zobulungu be-GTU kukufikelela ekufundiseni. Unyaka ngamnye, umbutho unikezela abafundi ababini baphumelele ekugqibeleni abafundi kunye nabafundi abathathu. Ukuhlangabezana nokufaneleka kwamashishini, kufuneka amalungu athathe inxaxheba kwi-GTU abathathi-nxaxheba kwaye bancedise kakhulu kwiinjongo zabo. Ulwabiwo-mali kwizinga likazwelonke lenziwe ngokufumaneka kwi-Fund ye-GTU ye-Fund ejongene nekomiti. Isahluko ngasinye sinokunikela ngeengxowa-mali ezongezelelweyo kumalungu afanelekileyo.
I-Gamma Theta Upsilon Intsebenziswano
I-Gamma Theta Upsilon isebenzisana ngokubambisana nemibutho efana nemibono efana nokukhuthaza intsimi ye-geography ngokubanzi; I-GTU iyasebenza kwiintlanganiso zonyaka zeMbutho wama-American Geographers kunye neBhunga likaZwelonke lezeMfundo zeMveli. Kule ntla nganiso, amalungu e-GTU aya kwiiseshoni zophando, iifestile kunye neentlalo zentlalo. Ukongezelela, i-GTU ilungu leMbutho weKholeji Ukuhlonipha iMibutho, ebeka imigangatho yokuhlonipha uluntu olugqwesileyo.
Iimpawu zeNautical Meiles zilinganiselwa njani?
Isakhiwo esikhulu kunazo zonke kwihlabathi
I-Coca-Cola Kuzo Zonke Izwe Kodwa Zintathu? Hayi!
IGreenland neAustralia: iI Continent okanye Akunjalo?
Amazwe omkhosi weNdebe yeHlabathi
Ukusebenzisa iDedia Media kwiHomeschool Credit
Iingelosi kunye neMpilo Yakho
IziNto ezithoba zokuNciphisa ngokuPhezulu ukuKhula kweMidlalo
Indlela yokudweba i-Daisy eyiyo
Iilwimi eziBhekiselele ukuQinisekisa ukuQiniswa kweeDrama nabaFundi beeDrama
Uluhlu lweeCigars ezingabizi
Ngaba u-Justin Bieber watshintsha ngokusemthethweni uhlanga lwakhe lwaseMelika yase-Afrika?
I-Organic Chemistry Prefixes kunye neeSifisi
Umhla woLonwabo Iingcamango zabafundi beKholeji
AbaGalati 2: Isahluko seSahluko seBhayibhile
I-Tarot Suit of Swords
Iimpawu eziphosakeleyo zeHillary Clinton
I-Prometheus: I-Bringer yoMlilo kunye noPhilophistist
Iimpawu zeJupiter - Inkwenkwezi yakho ekhanyayo
Funda ukuthetha ngokuchanekileyo amagama aseFrentshi 'Au' kunye 'noEau'
Amacandelo 101: Ziziphi na?
I-Geodesy kunye nobukhulu kunye neSimo sePlanethi yomhlaba